Ku soo noqoshada Metrobus | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDADib ugu noqo Metrobus
16 / 08 / 2012 DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Ilaa sanadka 2007, Metrobus, oo soo galay adeegyo heerar kala duwan ah isla markaana ku jiray ajandaha Istanbul doodaha kala duwan tan iyo bilowgiisii, ayaa ku soo noqday meeshii safarku ka bilaabay. 14 Qoraal uu soo saaray Kadir Topbas, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, oo ka soo muuqday saxaafadda bishii Agoosto 2012; Jid-gooyooyinka maxalliga ah xal uma noqon karaan taraafikada magaalada Istanbul xalkeeduna waa inuu ahaadaa mid laydh yar oo jidadka tareenka leh.
Labaduba inta lagu gudajiray howlaha mashruuca iyo ka dib markii lasiidaayay rugta, waxaa marar badan la cadeeyay in BRT aysan xalka joogtada ah uheleynin taraafikada Istanbul ayna laheyn awood ay kuxisaabto baahida.
Waxaa iska cad in nidaamka metrobusku yahay mashruuc la soo saaray iyada oo la raacayo qaabab aan la sii qorsheysanyn oo la soo bandhigi karo, kaas oo xisaabinta tirada rakaabka la qaadi karo inta lagu guda jiro saacadaha ugu sarreeya ee magaalada la iska indhatirayo. Qiimaynta lagu sameeyay Golaha Rugta ee la xidhiidha siyaasadaha gaadiidka ee Istanbul wakhtiyadii la soo dhaafay, oo ku saabsan maalgashiga BRT; doorbidida gawaarida, qorsheynta wadada iyo go'aamada xulashada goobta aan rasmiga aheyn ee marinka lugeeyaha ayaa lagu tilmaamaa dhibaatooyinka ugu weyn iyo sida lagama maarmaanka u tahay horumarinta noocyada gaadiidka dadweynaha oo leh tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in habka si joogto ah loogu xalliyo dhibaatooyinka gaadiidka ee Istanbul uu yahay nidaam metro oo isku dhafan oo magaalada oo dhan ah.
Halka ay gaartay maanta, qiimeynta ay sameysay Rugteenu waxay isu muujineysaa sidii wax wareysi ah. Intaa waxaa dheer, maanta Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay raadisay xallin cusub dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka ka soo foodsaaray magaalo-weynta oo waxay aqbashay xaq-u-yeelashada saadaasha ay muujiyeen rugteenu markii hore.
Daraasad cilmiyeed ayaa muujisay in nidaamyada waddooyinka, oo loo soo jeediyey inay xallilaan kordhinta taraafikada gawaarida, inay dhakhso badan u noqdaan kuwa dhib badan. Nidaamkan nidaamka metrobus, 3. Haddii mashruuca Bridge lagu hirgeliyo, wuxuu dib u bilaaban doonaa waqti gaaban. Maanta, anaga oo ah TMMOB Rugta Qorsheyaasha Magaalada, waxaan jeclaan lahayn inaan mar kale xoogga saarno; Nidaamyada culeyska waddooyinka kama jawaabaan baahida loo qabo gaadiidka magaalada waxayna sababaan khasaare aan loo dulqaadan karin. Dhanka kale, xalka joogtada ah ee gaadiidka magaalada Istanbul waxaa suurtagal ah maalgashi ku saleysan tareenka iyo xiriirkooda gaadiidka badda iyo noocyada kale ee gaadiidka dadweynaha. Qolkayagu wuxuu sii wadi doonaa inuu carrabka ku adkeeyo baahida iyo mudnaanta mashruucyada tareenka ee ay si cad ugu baahan yihiin magaalada Istanbul, wuxuuna sii wadi doonaa inuu bulshada ku wargaliyo dhaqamada waxyeelada u geysan doona magaalada dhibana u geysan doono.
IZBAN talaabo talaabo ah si Torbalı
Marshandis Bridge ayaa la dhamaystiray, Yht'ler waxay ku noqonayaan Saldhiga Tareenka ee Ankara
Dib-u-hagaajin ku sameeynta gaarka ah ee Saldhiga Tareenka ee Civril
TCDD ayaa ku dhawaaqday in Daahfurka dheeraadka ah ee Nazili iyo Söke
Taariikhda la xiriirta xawaalada marxuumka